Guqula iphepha lodonga lakho le-Android yonke le app | I-Androidsis
Kubasebenzisi abaninzi, ii-wallpapers ziyinto enomdla kakhulu. Nika ubuntu bakho kwifowuni kwaye uncede ukuguqula inkangeleko yayo ngemvelaphi nganye entsha. Ngaphandle koko, i ukhetho lwemali ekhoyo inkulu namhlanje. Kukho abo bafuna ukuba nemvelaphi eyahlukileyo kwifowuni yabo ye-Android yonke imihla. Kwaye kwaba basebenzisi, sineendaba ezimnandi. Kuba kukho isicelo esenza ukuba oku kwenzeke.
Yinkqubo yamaphephadonga kaGoogle. Isicelo esenzelwe abasebenzisi be-Android abafuna ukufumana ukhetho olukhulu lwee-wallpapers. Ke suku ngalunye banokuba nelinye elahlukileyo emnxebeni.
Isicelo ekuthethwa ngaso sibizwa ngokuba yi-Wallpaper. Ayilogama lokwenyani, kwaye inokwenza kube nzima ukuyifumana kwiVenkile yokuDlala, nangona ekupheleni kwenqaku sikushiya nekhonkco lokukhuphela. Enkosi kuyo, uya kuba nakho ukuba nemvelaphi eyahlukileyo yonke imihla kwifowuni yakho ye-Android.
Nje ukuba ukhuphele kwaye ufake usetyenziso kwifowuni yakho ye-Android, kuya kufuneka ukhethe udidi lwemali. Kuyo sifumana ukhetho oluninzi, ke sinokukhetha eyona siyithandayo kule meko. Nje ukuba sikhethe udidi, Cofa kwinketho yemali yemihla ngemihla.
Ndiyabulela kulo msebenzi, siya kuba nephepha lodonga lwemihla ngemihla kwifowuni. Ke ayizukuvumela ukuba sikruquke lodonga ekubhekiswa kulo. Ke, ukuba uthanda ukwahluka, uya kuba nakho ukubona imvelaphi emininzi. Ukhetho olukhoyo kwi-app lukhulu.
Njengakwizicelo zikaGoogle esizifumana kwiVenkile yokudlala, ukhuphelo losetyenziso lusimahla kwaye asinakuthengwa okanye intengiso ngaphakathi kuyo. Ungayikhuphela apha ngezantsi:
Ukuba ufuna ukuba nemali engaphezulu kwifowuni yakho, Unokuzikhuphelela imvelaphi yePixel 3.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Indlela yokuba nephepha lodonga elahlukileyo yonke imihla kwi-Android
Uyenza njani kwaye isebenzise inzwa ye-infrared yePocophone F1 njengekhamera